cameras - Synonyms of cameras | Antonyms of cameras | Definition of cameras | Example of cameras | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for cameras
Top 30 analogous words or synonyms for cameras
မက္ကထရောနစ်ပညာရပ် Engineering cybernetics တွင် မက္ကထရောနစ်စနစ်၏ Control Engineering ထိန်းချုပ်အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်အဓိကပါဝင်သည်။၎င်းကို စနစ်တစ်ခုကိုထိန်းချုပ်ရန်(သို့)ချိန်ညှိရန် အသုံးပြုသည်။(control theory တွင်ကြည့်ပါ)။ခေတ်သစ်ထုတ်လုပ်မှု ကိရိယာများတွင်ထိန်းချုပ်ဗိသုကာ ပညာရပ်ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။လူသိအများဆုံးဗိသုကာပညာရပ်များမှာhierarchy, polyarchy, heterarchyနှင့် Hybrid နည်းပညာတို့ဖြစ်ကြသည်။မက္ကထရောနစ်အတွက်အရေးကြီးသော Hybrid systems များကို production systems, synergy drives, planetary exploration rovers, automotive subsystems ကဲ့သို့သော anti-lock braking systems, spin-assist နှင့်နေ့စဉ်သုံးကိရိယာများဖြစ်သော autofocus cameras, video, hard disks, နှင့်CD playersတို့တွင် ကောင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဆိုနီ ဆိုနီသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများကို ရွေးချယ်စရာ စုံစုံလင်လင်ဖြင့် ထုတ်လုပ်နေသည်။ ချိန်ပြီးရိုက်ကူနိုင်သော ကင်မရာအမျိုးအစားကို Cyber-shot အမည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်နိုင်သည့် ဒီဂျစ်တယ်မှန်ဘီလူးတစ်ခုသုံး ကင်မရာများ (digital single-lens reflex cameras)ကို ဆိုနီ အယ်လ်ဖာ အမည်ဖြင့်လည်းကောင်း ထုတ်လုပ်နေသည်။ ပထမဆုံး Cyber-shot ကင်မရာကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်က စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများမှာ အသစ်အဆန်းကဲ့သို့ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဆိုနီ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာဈေးကွက် ဝေစုမှာ ၂၀% မှ ၉% အထိလျော့ကျခဲ့သည်။
Queercore ၂၀၀၅ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် David Ciminell နှင့် Ken Knox တို့၏ The Lound and Raucous Rise of Queer Rock ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၉၀တွင် အမေရိကန်မှ လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ သမိုင်းကြောင်းကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်အခါက ဂီတသမားတို့၏ တွေ့ဆုံတိုင်ပင်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။ queercore သည် ၂၀၀၀ခုနှစ် အစောပိုင်းမှ နိုင်ငံတကာဖြစ်စဉ်များကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Low End Models, Rhythm King, ဂျာမနီမှ Her Friends, နော်ဝေးမှ Kid like Us Outနှင့် အာဂျီးတီးနားမှ She Devils တို့ပါဝင်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံမှ တိုရွန်တိုမှ kids on TV သည် electronic တီးခတ်ခြင်းကို စူးစမ်းသူများတွင် Montral မှ Lesbians on Eastay, တိုရွန်တိုမှ The Hidden Cameras နှင့် anti-folk နှင့် ဟာလီဖက်မှ Eekum Seekum တို့ပါဝင်သည်။
ဗော့စတော့ ၁ ခရီးစဉ်တွင်မည်သူလိုက်ပါပျံသန်းမည် နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မှာ နီကိုလိုင်ကမန်နင်( Nikolai Kamanin)ပေါ်လုံးဝမူတည်နေသည်။ ဧပြီ ၅ ရက်နေ့ဒိုင်ယာရီတွင် ကမန်နီက သူသည် ဂါဂါရင်နှင့်တီတော့ဗ် မည်သူ့ကိုရွေးရမည်ကိုမဆုံဖြတ်နိုင်သေးကြောင်းရေးသားထားသည်။ He wrote: "The only thing that keeps me from picking [Titov] is the need to have the stronger person for the one day flight." Kamanin was referring to the second mission, Vostok 2, which would lastafull day, compared to the relatively short single-orbit mission of Vostok 1. ဂါဂါရင်နှင့်တီတော့ဗ်တို့အား ဧပြီ ၉ ရက်နေ့အစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသိရှိစေခဲ့ရာ ဂါဂါရင်မှာများစွာဝမ်းမြောက်ခဲ့ပြီး တီတော့ဗ်မှာစိတ်ပျက်သွားခဲ့သည်။ On April 10, this meeting was reenacted in front of television cameras, so there would be official footage of the event. This included an acceptance speech by Gagarin. As an indication of the level of secrecy involved, one of the other cosmonaut candidates, Alexey Leonov, later recalled that he didn't know who was chosen for the mission until after the spaceflight had begun.
လက်ပ်တော့ပ် ကွန်ပျူတာ လပ်တော့အများစုတွင် 2.5-inch driveတစ်ခုသာ ပါဝင်သည်။ သို့သော် screen ၁၇-လက်မထက် ကျယ်သောလပ်တော့အနည်းငယ်တွင် drive နှစ်ခု တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ လပ်တော့အချို့သည် အချက်အလက်အများအပြားကို သိမ်းထားနိုင်သည့် 2.5-inch drive နှင့် mSATA သို့မဟုတ် M.2 SDD drive တို့ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ထောက်ပံထားသည်။ mSATA နှင့် M.2 SDD drive တို့သည် ပမာဏနည်းသည်။ သို့သော် အချက်အလက်များကို ပိုမိုလျှင်မြန်သောအမြန်နှုန်းဖြင့် ဖတ်နိုင်(read) ရိုက်နိုင် (write) သည်။ လပ်တော့၏ I/O performance ကို မြှင့်တင်ရန် operating system partition ကို SSD ထဲတွင် နေရာယူသင့်သည်။ performance ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ သေးငယ်၍ OS နှင့်သင့်လျော်သော SSD of 16-32 GB ကို cache drive အဖြစ်အသုံးပြုခင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုထားသော SSD သည် စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသော ပုံစံမရှိပါက အချို့လပ်တော့များတွင် drive ကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း မပြုနိုင်ပေ။ ပြုပြင်နိုင်ရန် proprietary daughter card တစ်ခု လိုအပ်သည်။ အချို့လပ်တော့များ၏ ပါဝင်သော SSD များသည် နေရာလွတ်ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသည်။ ၎င်းလပ်တော့များသည် အသုံးပြုသူများ၏ အချက်အလက်များကို သိမ်းရန် cloud storageservices ကို ထောက်ပံထားကြသည်။ မြင်လွယ်သော နမူနာလပ်တော့တစ်ခုမှာ Chromebook ဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသော external HDDs သို့ဟုတ် NAS data storage servers သည် RAID နည်းပညာကို ထောက်ပံပေးထားကြသည်။ RAID ကို လပ်တော့အားလုံးနီးပါးသည် USB,FireWire, eSATA, or Thunderbol' ကြိုးဖြင့် သို့မဟုတ် ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ထားသော network မှတစ်ဆင့် အချက်အလက်သိမ်းနိုင်သည့် ပမာဏကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ လပ်တော့အများစုတွင် card reader တစ်ခုလည်းပါဝင်သည်။ card reader သည် memory card, SD သို့မဟုတ် microSD cardsများပါဝင်သော digital cameras နှင့်ချိတ်ချက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြလုပ်ပေးသည်။ လပ်တော့အသုံးပြုသူသည် SD card ထဲရှိ ရုပ်ပုံများကို ကွန်ပျူတာထဲသို့ သွင်းနိုင်သည်။ SD card ထဲရှိ အချက်အလက်များကို ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။